Yaaliin talaallii kaansarii irratti godhamaa jiran abdii qabeessa ta’uu ibsameera – Fana Broadcasting Corporate
Finfinnee, Eebila (FBC)-Addunyaarra dhibeewwan du’aaf nama saaxilan keessaa dhibeen kaansarii sadarkaa duraa irratti argama.
Qoratoonni dhibee kaansarii ittisuuf yeroo yeroon yaalii adda addaa gochaa kan jiran yoo ta’u, odeeffannoon haaraa tibba kana Ameerikaa irra dhaga’ame tokko kaansarii ittisuuf duula godhamuuf abdii qabeessa jedhameera.
Innis talaallii kaansarii yoo ta’u, yaaliin talaallii dhibee kaansarii irratti godhamaa jiran abdii qabeessa ta’aa dhufuun isaanii ibsameera.
Talaallichis dandeettii qaamni keenya dhibee of irraa ittisuu kan guddisu ta’uu dubbatameera.
Dabalataanis talaallichi wantoota dhibee kaansariif sababa ta’an kanneen qaama keenya keessatti argaman kan baleessu ta’uu qorataan Mana Barumsaa Yaala Fayyaa Niiyoork Siitii Ameerikaa Dooktar Jooshiwa Beradaay dubbataniiru.
Yaalii talaallichaan gaggeeffameen wantoota dhibee kaansariif sababa ta’an ittisuu danda’uun irra gahameeras jedhaniiru Dooktarichi.
Talaallichi hanga ammaatti namoota 6 irratti yaalamuu fi wantoota dhibee kaansariif sababa ta’an qaama namaa keessatti argaman hanga ji’oota 18 keessatti baleessuu danda’uus ibsaniiru.
Yaaliin hanga ammaatti godhame kun gara fuulduraattis cimee kan gaggeeffamu ta’uu ibsaniiru qoratichi.
Sagantaa tola oolmaa Gannaatin dhiiga korojoo kuma 14 sassaabun karoorfameera
Dhugaatiin shukkara baay’atu dhibee kaansariif nama saaxila jedhame
Abbaan taayitichaa ummanni oomishaalee nyaataa gosa 57 akka hin fayyadamne…
Baatiiwwan Gannaa maalif hawwataa ta’u?